Ntugharị - Okwu Okwu • Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi
Obi dị anyị ụtọ inye gị ntụgharị akpaka nke ihe niile HTML na weebụsaịtị anyị. A na-eji kọmputa eme nsụgharị ndị ahụ, ọ dị na asụsụ 100. Nke a pụtara na ọrụ niile nke Harold W. Percival nwere ike ịgụ ugbu a ọtụtụ ndị nọ n'ụwa n'asụsụ ala ha. Ederede PDF nke akwụkwọ Percival na ihe odide ya ndị ọzọ na-adịgide na Bekee. Faịlị ndị a bụ ndezigharị nke ọrụ mbụ, a naghị atụ anya ụdị eziokwu a na ntụgharị akpaka.
Na ala ala aka nri nke ibe obula, enwere asusu asusu a ga - enyere gi aka itughari peeji a:
Site na ịpị onye na-ahọrọ, ị nwere ike họrọ asụsụ ịchọrọ ịgụ.
Ntụgharị akwụkwọ ntuziaka
Anyị na-enyekwa gị Okwu Mmalite nke Echiche na Mbibi n'asụsụ ole na ole ndị ọrụ afọ ofufo bịarutere ịmepụta. Edepụtara ha n'okpuru mkpụrụedemede.
Isi nke mbụ a na-ebute ụfọdụ isiokwu metụtara akwụkwọ a. Ọ na-enye onye na-agụ ya otu ihe gbara ọkpụrụkpụ na ihe edere maka akwụkwọ ahụ dum. Maka nke a, anyị na-enye ntụgharị asụsụ maka njiri mara mmadụ nke mmeghe mgbe anyị nwere ike. Anyị nwere ekele dị ukwuu maka ndị ọrụ afọ ofufo bụ ndị nyewooro The Foundation Foundation aka nsụgharị nke isi nke mbụ a. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye nsụgharị nke Okwu Mmalite n'ime asụsụ ndị ọzọ.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (German: Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Esperanto: Okwu Mmalite ka Echiche na Mbibi)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (Dutch: Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi)
Русский: Введение в Мышление и судьба (Russian: Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi)
Okwu Mmalite n'asụsụ Bekee
Ọtụtụ n'ime isiokwu ndị ahụ ga-adị iche. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike iju anya. I nwere ike ịchọpụta na ha niile na-agba ume ichebara echiche. HW Percival